ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သို့ စစ်ဆင်ရေး သေးငယ်သော အရွယ် အလုံး အဆို့ရှင်, လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, plug ကို / damper အဆို့ရှင် နှင့် auသို့mation ၏ rotary machတွင်es.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We များမှာ မျှော်လင့် ဖြစ်လာသည် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
1. Compact ဒီဇိုင်း: အသေးစား, အလင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း, မြင့်မားသော torque နှင့် AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတပုံများအတွက်အမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ် option ကိုလျှပ်စစ် actuator လှည့်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
3. စက်မှုန့်သတ်ချက်ဝက်အူ: AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတစ်ပုံ၏စက်မှုန့်သတ်ချက်ဝက်အူလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့်ခရီးသွားကျော်ထံမှ actuator တားဆီး, ချိန်ညှိဖြစ်ကြသည်။
4. မထည့်အာကာသအပူပေးစက်: ဒါဟာအိမ်ယာ၏ပြည်တွင်းရေး condensing ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးခြောက်သွေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုသည်။
AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတစ်ပုံ၏ shell ကိုလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သည့် matrix ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်ရာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကြောင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာနေသည်။ စက်ပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်ပက်ဖျန်း, နှင့်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာတဲ့ချေးခုခံဖြစ်ပါတယ်။ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုလက်ရာမြောက်သောနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြှင့်အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator turn ဥရောပ, အမေရိကတိုက်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအပါအဝင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 companies.If နှင့်အတူအလွန်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတပုံအလှည့်ကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ် actuator အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်း, ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတစ်ပုံ၏အသွင်အပြင်လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးသေချာနိုင်ပါတယ်။
မေး: သင် AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတပုံများအတွက်မဆိုလျှော့စျေးပေးပါနဲ့လျှပ်စစ် actuator turn?
Q: သင့်ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလေးပုံတပုံများအတွက်အာမခံကာလလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်မယ့်?
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်